Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Bandhigga Koobka Carolina wuxuu ku soo baxaa Dabaqadaha Sare ee Paddle
Koobka Carolina waa xaflad afar maalmood ah oo dhacdooyin ah oo ka kooban toddobo jinsi, seminaarro iyo xarumo caafimaad oo ay leeyihiin faa'iidooyinka, bandhigyada alaabada iyo bandhigyada.
Tristan Boxford, oo ah maamulaha APP ayaa yiri "Koobka Carolina waa ururka kaliya ee rasmiga ah ee Xirfadleyda Paddlesurf ee 2021." “Dhacdadan ayaa lagu soo bandhigi doonaa masaafada iyo orodka labadaba lacagta abaalmarinta APP. Si kastaba ha ahaatee, duruufo aan caadi ahayn awgood, kuma sii soconayno Socdaalka Adduunka sannadkan. ”
APP waxaa loo aqoonsaday oo la mamnuucay inuu yahay socdaalka rasmiga ah ee horyaalnimada adduunka ee ku -daba -joogga ah ee Guddiga Olombikada Caalamiga ah ee Isboortiga Surfing iyo Ururka Duufaanta Caalamiga ah.
Sida ugu habboon oo leh xeebaha badweynta iyo xeebaha dhawaaqa leh, dhammaan jinsiyadaha iyo waxqabadyadu waxay ka bilowdaan kuna dhammaadaan Blockade Runner Beach Resort, oo ah goobta rasmiga ah ee Koobka Carolina. Waxqabadyadu waxay bilaabmayaan Nofeembar 4 waxayna soo gabagabeeyaan Nofeembar 7.
Kaalinta 13-aad ka galay adduunka marka loo eego paddleboard-ka haweenka, North Carolina April Zilg ayaa ku dhawaaqday qorshayaal ay ugu tartami doonto tartanka Carolina Cup ee XNUMX-mayl ee Graveyard Race ee Wrightsville Beach. "Waxaan qorsheynayaa inaan tartamo bisha Nofembar," ayuu yiri Zilg. "Waa mid ka mid ah jinsiyadaha ugu waaweyn adduunka iyo mid ka mid ah koorsooyinka ugu adag."
"Tartanka [Qabuuraha] waa mid gaar ah, oo ku dhex maraya badweynta iyo biyaha Intracoastal, adoo maraya laba marin -biyood, la dagaallamaya mawjadaha, iyo gelitaanka iyo ka -soo -bixidda badda," ayuu yiri Zilg. “Waa tijaabo aad u wanaagsan oo ah xirfadaha ku xeeran ee qof walba oo dabaasha ah, dabeecadda hooyaduna mar walba si fiican uma ciyaarto. Marka laga reebo qaar ka mid ah tartamada aagagga u gaarka ah ee loo qoondeeyay, Tartanka Qabuuraha ayaa u taagan dhib, gaar ahaan haddii aad la dagaallanto mawjad adag. Sidoo kale waa masaafo nus-marathon ah, markaa shiidku waa dhab. ”
Dadka kale ee hore u soo galay waxaa ka mid ah Casper Steinfath, oo ah Horyaalka Adduunka ee xukuma ragga. Isagoo ku koray tuulo kalluumeysi oo ku taal Denmark, Steinfath wuxuu horumariyay jaceylka isboortiga biyaha kahor intuusan socon, isagoo fuushan dusha aabbihiis. Hadda waa 28 jir, Steinfath waa mid ka mid ah ciyaartooyda isboortiga biyaha ugu wanaagsan, isagoo ku guuleystay guulo iyo horyaalo badan intii uu ku guda jiray xirfadiisa.
Sanadkii 2020, Steinfath wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee istaaga Slogerrak, oo ah 130 kilomitir oo biyo khiyaano ah oo Denmark kala qeybisa Norway.
Ciyaaryahanka reer France ee Arthur Arutkin, oo kaalinta labaad ka galay adduunka, iyo Titouan Puyo oo ka tirsan New Caledonia, oo galay kaalinta toddobaad, ayaa is -diiwaangeliyey tartanka - iyada oo kuwo kale oo badan ay iman doonaan.
Seychelle Webster, oo ah Horyaalka Adduunka ee ku jira qeybta haweenka ee APP, ayaa ka qeyb geli doonta Koobka Carolina waxayna qorsheyneysaa inay bixiso xarumo caafimaad, inay diyaar u tahay maalmaha demo, oo ay caawiso inta lagu jiro Ciyaaraha Carruurta. "Ma qorshaynayo tartanka sanadkan," ayay tiri Seychelle. “Koobka Carolina wuxuu had iyo jeer ahaa mid ka mid ah tartammadayda ugu muhimsan sanadka. Laakiin hadda, ahmiyadayda ugu sarreysa iyo caqabadda ugu xiisaha badan ayaa ah inaan uur leeyahay. Markaa, taas ayaa ahmiyaddayda sannadkan, mana tartami doono. ”
"Tartanka iyo in kale, toddobaadkan Wrightsville wuxuu noqon doonaa mid aad u xiiso badan," ayay raacisay Seychelle. "Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko oo aan la qabsado qof walba oo aan taageero APP iyo Koobka Carolina inkastoo ay jiraan caqabado adduunka oo dhan ah."
Koobka Carolina waxaa soo qabanqaabiyay Kooxda Wrightsville Beach Paddle Club waxaana soo bandhigay Shirkadda Kona Brewing. Samafalka loo qoondeeyey Koobka Carolina waa Nourish North Carolina, oo ah 501 (c) (3) aan macaash doon ahayn oo hadafkeedu yahay inay siiso cunno caafimaad leh carruurta gaajaysan, oo awood u siineysa inay ku guuleystaan ​​fasalka dhexdiisa iyo bulshooyinkooda.